” သူမ ရန်ကုန် မှာပဲ ရှိနေတယ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ” သူမ ရန်ကုန် မှာပဲ ရှိနေတယ် “
” သူမ ရန်ကုန် မှာပဲ ရှိနေတယ် “
Posted by YE YINT HLAING on Sep 28, 2012 in My Dear Diary | 54 comments
အဖော်မဲ့ လို့ အထီးကျန်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ အထီးကျန်တဲ့စိတ်ကြောင့် အဖော်မဲ့ဘဝ တခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို အမြဲခံစားနေရတယ် ။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့ အဲဒီခံစားမှုကို သံယောဇင် တွယ်လာမိပြန်တယ် ။ တယောက်တည်း နေရတာကိုလည်း နှစ်သက်လာမိတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီဝိုင်းလွတ်ကျယ်ကျယ်ထဲက တလုံးထဲရှိတဲ့ အိမ်သေးလေးကို တလ ( ၃၅၀၀၀ ) ကျပ် နဲ့ ငှါးရမ်းနေထိုင်ခဲ့တာပေါ့ ။ မြေရှင် အတွက် ခြံစောင့် သဘောမျိုး လည်း ရသလို တလ ( ၃၅၀၀၀ ) လည်းရ ၊ ကျွန်တော့ အတွက်ကလည်း ရန်ကုန် လိုမြို့ကြီး မျိုးမှာ တယောက်တည်း နားအေးပါးအေး နေရာလေးရလို့ ဟန်ကျတာပေါ့ ။ ခြံထဲမှာ ရေတုံကင်နဲ့ ရေပေပါ တစ်လုံးရှိနေလို့ ကျွန်တော့ တစ်ဦးတည်း သုံးရေ အဆင်ပြေပါတယ် ။ ကျွန်တော် ပြောင်းလာပြီး ဒုတိယ နေ့မှာပဲ ခြံရှင်က နီးစပ်ရာကနေ မီးကြိုးသွယ်ပေးပြီး နှစ်ပေမီးချောင်းလေးပါ ဆင်ပေးသွားတယ် ။ စားရေး သောက်ရေး ကတော့ ကျွန်တော့ထုံးစံ အတိုင်း အပြင်မှာကြုံသလိုပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီအိမ်လေးကနေ အလုပ်သွားလိုက် အလုပ်ကပြန်လာလိုက် စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်လိုက်နဲ့ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ဖြတ်သန်း လာခဲ့တာ ( ၂ ) လ ကျော် သွားခဲ့ပြီပေါ့ ။ ရက်ပေါင်း ( ၉၀ ) ကျော် ကြာခဲ့သည့် တိုင်အောင် အရက် လုံးဝ မသောက်ပဲ နားနေခဲ့တဲ့ အချိန် ကာလလေးတွေပေါ့ဗျာ ! တညမှာ အတိတ်အတွေး တချို့ ဝင်လာပြီး ဘရိတ်အုပ် မရဖြစ်လာတာကြောင့် အိပ်လို့ မရခဲ့ဘူး ။ မျက်လုံးတွေ မှိတ်ချည် ဖွင့်ချည် နဲ့ အိပ်ပျော်အောင်ကြိုးစား ပေမဲ့ အိပ်လို့မ ရခဲ့ဘူး ။ အချိန်က ညတစ်နာ ရီ စွန်းစွန်းရှိနေပြီ ။ အဲဒီည က အဲဒီအိမ်လေးထဲမှာ အသက်ရှု ကြတ်လာသလို မွန်းကြတ်လာသလိုခံစားမိတယ် ။ ဒါနဲ့ အပြင်ထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ လမ်းမ ဘေးမှာ ( ၅ ) မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရင်း တွေးနေမိသေးတယ် ။ အဲဒီ အချိန်မှာ Taxi ကားတစ်စီး ဘေးမှာရောက်လာပြီး မေးတော့ – ခုချိန် အေးအေးဆေးဆေး သီချင်း ဆိုလို့ သောက်လို့ အဆင်ပြေမဲ့ ကေတီဗီ တခုခုကို ပို့ပေးဗျာ လို့ ပြောပြီး ကားပေါ် တက်ထိုင်လိုက်တယ် ။
ဝိတ်တာကောင်လေး ပြောလာတဲ့ မှာလို့ ရနိုင်တဲ့ အရက်တွေက ဈေးကြီးနေတာမို့ မြန်မာဘီယာ သုံးလုံး နဲ့ ငါးမုန့်ကြော် တစ်ပွဲကို တစ်ခါတည်း မှာလိုက်တယ် ။ မှာထားတာတွေ လာချပေးပြီးတော့ ဝိတ်တာကောင်လေး က” အကို့! ကောင်မလေး တစ်ယောက် ထည့်ပေးမယ် နော် “လို့ ပြောလာတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ” နေ- နေ- ညီလေး အကို တစ်ယောက်တည်းသောက်ပြီး သီချင်းဆို ချင်လို့ပါကွာ “လို့ ပြောတော့ ဝိတ်တာကောင်လေး က “အကိုဆိုချင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရွေးပေးမဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် လိုတယ်လေ” လို့ ဆက်ပြော လာပြီး အခန်း ( ၂ ) ခန်းကို သူတစ်ယောက်တည်း ကိုင် နေရတဲ့ အကြောင်းပါပြောလာ တာမို့ ကျွန်တော်လည်း ဆက်မငြင်းတော့ပဲ လက်ခံလိုက်တယ် ။ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ကျွန်တော့ အခန်းထဲကို ရောက်လာပြီး ဘီယာ စသောက်နေ ပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့ ဘေးမှာ လာထိုင်ပြီး ဘာသီချင်း ဆိုမှာလဲလို့ ကျွန်တော့ အတွက် သီချင်း ရွေးပေးဖို့ မေးလာတယ် ။ နည်းနည်းလေး မူးလာမှ ဆိုမယ် ဆိုတဲ့ အတွေး ပေါ်လာတာမို့ သီချင်း အရင် နားထောင်ချင်တယ် ကြိုက်တာဖွင့်ပါလို့ ပြောလိုက်တယ် ။ အဲဒီ ကောင်မလေး ပထမဆုံး ဖွင့်ပေးတဲ့ သီချင်း က ဂျီလတ် ရဲ့ ” ပြော ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပေါ့ဗျာ ! တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ် နားထောင်ရင်း သူမ ငှဲ့ပေးတဲ့ ပုလင်းထဲက ဘီယာ တွေ သောက်ရင်း ဘီယာ ( ၃ ) လုံး ကုန်သွားတယ် ။ နောက်ထပ် ဘီယာ နှစ်လုံးမှာပြီး အတော်အတန် မူးယစ် လာပြီမို့ ဟန်ထွန်း ရဲ့ “သူ့အချစ် ” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကျွန်တော် စ ဆိုခဲ့တယ် ။ အဲဒီညရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို ဘီယာ ငါးလုံး သောက် သီချင်းတွေ နားထောင် သီချင်းတွေ ဆိုပြီး ဖြတ်သန်းလိုက်တယ် ။ လက်ထဲ ရှိတာလေးလည်း ပြောင်သလောက် နီးပါးပေါ့ ။
တလ လောက်ကြာတော့ အလုပ်နားရက် ရဲ့ နေ့ခင်း အချိန် နေပြည်တော် ရုပ်ရှင်ရုံ မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး တစ်ယောက် တည်း ဘယ်ဆက်သွားရရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစား မရသေးတာနဲ့ ဆူးလေ ဘုရားပေါ်ကို တက်ခဲ့တယ် ။ ဘုရား ဝတ်ပြုပြီး ဘာရယ်မဟုတ် ဘုရားရင်ပြင် တနေရာမှာ ထိုင်မိတယ် ။ ပြီးတော့ တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့် ပေါ့ ။ အဲဒီမှာ တွေ.ပါတယ် — သူမ ကို — နာမည် လည်း အဲဒီညက မမေးခဲ့မိတဲ့ ကေတီဗီ ညက ကောင်မလေး ပေါ့ ! တစ်ယောက်တည်း ငေါင်ငေါင် တွေတွေ ငေးငေး လေး ထိုင်နေ ပြီး ကေတီဗီ ညက ဝတ်စားဆင်ယင် ထားတဲ့ပုံစံ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဝတ်စားထားပုံလေး က သူမလေး နဲ့ လိုက်ဖက် လှပလို့ နေပြန်ပါတယ် ။ ကျွန်တော့ ကို မြင်ပုံ မရ တာမို့ ကျွန်တော် သူမ ရှိရာကို သွားပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် ။ ကျွန်တော့ ကို ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ချိန်မှာတော့ ” ဩ ! အကို ! ” ဆိုပြီး ပြန်နှုတ်ဆက်လာပါတယ် ။ ကျွန်တော့ စိတ်က ရင်းရင်းနှီးနှီး လေသံမျိုးနဲ့ပဲ ” ညည်း ကို ငါ ဟိုနား က ကြည့်နေတာ ။ အတွေးလွန် နေတယ် ထင်လို့ ထ လာတာ ။ တစ်ယောက် တည်း လာတာလားလို့ မေးလိုက်တယ် ” သူမ ကလည်း “ဟုတ်ကဲ့” ဆိုပြီး အပြုံးနဲ့ ရင်းရင်း နှီးနှီး စကားပြန်ပြောလာတယ် ။ ခဏအကြာ ပြောကြရင်း ကနေ ကျွန်တော် နေ့လည်စာ မစား ဖြစ်ခဲ့တာကို ပြောမိသွားပြီး သူမ ကိုပါ ကြက်လျှာစွန်း ဒန်ပေါက် စားဖို့ ခေါ်လိုက်တယ် ။ စဉ်းစား နေဟန် ပြုနေတာမို့ ကျွန်တော် က ထပ်ပြီး လိုက်စားဖို့ ခေါ်လိုက်တယ် ။ ဒန်ပေါက်ဆိုင်မှာ လူကျ နေတာမို့ စားပြီး စကား ထိုင်မပြောတော့ပဲ ဆိုင်ထဲ က ထွက်ခဲ့ကြတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်သွားရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတာမို့ ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ သူမ ကိုလည်း ပြန်တော့ မှာလား မေးလိုက်တယ် ။ ဒီတော့ သူမ က ရွှေတိဂုံ ဘုရားကို သွားဦးမယ် ။ အချိန်ရရင် လိုက်ခဲ့ပါလား လို့ ဆိုတာနဲ့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားကို ရောက်ခဲ့ ကြပြန်တယ် ။ အဲဒီ ရောက်မှ အဲဒီနေ့ က သူမ ရဲ့ ( ၁၉ ) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဖြစ်တာရယ် ၊ အထက်အညာ က ရွှေဘိုသူ ဖြစ်တာရယ် ၊ သူမ ဖခင် ဆုံးပါး သွားခဲ့လို့မိခင် နဲ့ မောင်ငယ်ညီမငယ် ( ၃ ) ဦးကို ထောက်ပံ့ပေးနေတာရယ် ၊ သူမ မိသား စု ကို သတိရ လွမ်းဆွတ်နေတယ် ဆိုတာတွေကို သိတော့တယ် ။ ရွှေတိဂုံ ဘုရား ကအပြန် မြေနီကုန်း အရောက် ကိုယ်သင့်ရာ ဘတ် ( စ ) ကား ကိုယ်စီ ဆက်စီးကြပြီး လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ် ။ ကျွန်တော် နေတဲ့ အိမ်လေးကိုရောက်တော့ သူမ အကြောင်းကိုပဲ တွေးနေမိတယ် ။ ကျွန်တော့ လက်ရှိ ဘဝ နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ် နဲ့ မိသားစု ဘဝမှာကလည်း ထူးထူးထွေထွေ တွေးစရာ ရယ်လို့ မရှိတော့ကာ သူမနဲ့ လတ်တလော သက်ဆိုင်တဲ့ အတွေးက ကြီးစိုး နေပြန်တယ် ။ စိတ်ကူး တခုပေါ်လာတာမို့ ရေချိုး အဝတ်အစား လဲပြီး ဆရာသမား တယောက်ဆီ ကို သွားပြီး ပိုက်ဆံ ချေးတယ် ။ ဘုရားပေါ်မှာ သူမ ပြောခဲ့တဲ့ ကိုးတန်းအောင်ပြီး ဆယ်တန်းမတက် ခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ သူမ အတွက် သင့်တော်မဲ့ စာအုပ်လေး ( ၃ ) အုပ်ဝယ်တယ် ။ အမျိုးသမီး လက်ကိုင်အိတ်လေး တစ်လုံးလည်းဝယ် ပြီး အဲဒီအိတ်ထဲ ကို စိတ်ကူးတည့်ရာ သူမနဲ့ လိုက်ဖက်မယ် ထင်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ်စည်း လေးတွေဝယ်ထည့်တယ် ။ ဒါတွေအားလုံး ကို ပလပ်စတစ် လက်စွဲအိတ် တစ်လုံးဝယ်ပြီး စုပေါင်းထည့်လိုက်တယ် ။ အပြင် က ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ မသိအောင်ပေါ့ ။ ပြီးတော့ သူမရှိ ရာ ကေတီဗီ ကို သွားတယ် ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်က ရောက်ခဲ့ တဲ့ အခန်းပဲ ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အားသွားတယ် ။ သူမကို အခန်းစောင့်ဝိတ်တာနဲ့ ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ အခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့ သူမ က ကျွန်တော့ကို မြင်တော့ မျက်လုံး အဝိုင်းသားနဲ့ အံ့ဩနေချိန်မှာ မွေးနေ့ လက်ဆောင် မပေးလိုက်ရလို့ လာပေးတာလို့ ပြောရင်း ကျွန်တော်ဝယ်လာ တဲ့ ပစ်စည်း တွေ သူမ ကို ပေးလိုက်တယ် ။ အိတ်ထဲ က ပစ်စည်း တွေထက် စာအုပ်လေးတွေ ကို အသေအချာ ကြည့်တယ် ။
အခန်းစောင့်ဝိတ်တာဝင်လာပြီး ဘာမှာဦး မလဲ အကို လို့ မေးတော့ ကျွန်တော် အချိုရည် နှစ်ဘူးပဲ မှာလိုက်တယ် ။ မွေးနေ့ရှင် ဖြစ်တဲ့ သူမကို သူမ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ် ဆိုပေး ဖို့ တောင်းဆိုတော့ သူမ က ခိုင်ရွှေဝါ ရဲ့ ” “ငယ်ချစ်ပုံပြင်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ဆိုပြတယ် ။ သီချင်း ဆိုရင်း ပြုံးနေတဲ့ သူမ မျက်ဝန်း အစုံ မှာလည်း မျက်ရည်တွေဝဲလို့ ။ ဘာလို့လဲ လို့ ကျွန်တော် က မေးတော့ ပျော်လို့ တဲ့ ။ အဲဒီ သူမ မွေးနေ့ညမှာ အဲဒီကေတီဗီဆိုင် ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူမရဲ့ တာဝန်ချိန်တွေ အကုန်လုံးကို ကျွန်တော် ယူထား လိုက်တယ် ။ သီချင်း ဆိုကြတယ် ။ စကား ပြောကြတယ် ။ ကျွန်တော် ကော သူမပါ မုသား မပါတဲ့ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်အကြောင်း တွေကို အမှန်အတိုင်းပြောခဲ့ကြရင်း တစ တစ ရင်းနှီး လာခဲ့ ကြတယ် ။ ဒီလို နဲ့ သုံး လ လောက် ကြာတော့ တရက် မှာ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်တဲ့ ကုမ်ပဏီ က ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတဦး မင်ဂလာ ပွဲကို တက်ဖို့ သူမ ကို ခေါ်တယ် ။ ပထမ တော့ သူမ လိုက်ရမှာ ကြောက်နေတယ် လို့ ပြောတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် က သိမ်ငယ်စရာ မရှိဘူး ! လက်ရှိ ဘဝ ကို အခိုက်အတန့် လို့ သဘောထားပြီး လိုက်ခဲ့ပါလို့ ပြောပြီး ခေါ်တယ် ။ သူမ လိုက်လာတယ် ။ ကုမ်မဏီ ရဲ့ စက်ရုံ ဝင်းထဲကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အရင်ဝင်ကြတယ် ။ ကိုယ့်ကုမ်မဏီ က ဝန်ထမ်းတွေ က စက်ရုံထဲမှာ လူစုပြီး မှ မင်ဂလာပွဲ ကို ချီတက် ကြမှာလေ ။ စက်ရုံ ပိတ်ရက်မို့ မင်ဂလာပွဲ မသွားမှီ စက်ရုံထဲ မှာ ဝိုင်းဖွဲ့ သောက်သူတချို့ က တိုက်လို့ ကျွန်တော် နှစ်ပက် လောက် သောက်လိုက်မိတယ် ။ ဒါကို သူမ က မကြိုက်ဘူး ။ မျက်နှာ အမူ အရာနဲ့ ပြပြီး ထပ် မသောက်ဖို့ တားတာနဲ့ နှစ်ပက် နဲ့ ရပ်လိုက်ရတယ် ။ မင်ဂလာ ဆောင် ရောက်တော့ သူမ ကို ချစ်စရာ လေးဆိုပြီး အားလုံး ကပြောကြ နှုတ်ဆက်ကြတယ် ။ အစား ကောင်းကောင်း မစားနိုင်ပဲ ပြန်ချင်နေတဲ့ သူမ ကို သနား လာတာနဲ့ အချိန်ကြာကြာ ဆက်မထိုင်တော့ပဲ ထပြန်ခဲ့ကြတယ် ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့ ရဲ့ ဘုံဗိမာန် လေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် ငှါးနေတဲ့ အိမ်လေး ရှိရာကို ခေါ်ပြတယ် ။ ကျွန်တော့ နေထိုင်မှု ပုံစံ ကို ကြည့်ပြီး သူမ တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ် ။ ကျွန်တော် နေတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ စောင် ၊ ခြင်ထောင် ၊ ခေါင်းဦး၊ သံသေတ်တာ တစ်လုံး ၊ ရေသန့်ဘူးကြီး တစ်လုံးနဲ့ စာအုပ်တွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်တလုံး ဒါပဲရှိတယ် ။ ကျွန်တော့ အနေ နဲ့ ကတော့ ဒီထက် ပိုပြီး ဘာမှ မလိုဘူး ။ ဒါနဲ့ သူမ က အပြန်မှာ မလျှော်ရသေးတဲ့ ကျွန်တော့ အဝတ်တွေ ယူသွားတယ် ။ ပုံမှန် တပတ် တကြိမ် အငှါး လျှော် တဲ့ နေရာ ပို့နေကျ ဆိုတာ သူမ သိပေမဲ့ အကို့ အဝတ်တွေ လျှော် ပေးချင်လို့ပါလို့ ပြောလာတာမို့ ကျွန်တော်လည်း မတားတော့ပဲ ခွင့်ပြုလိုက်တယ် ။
တရက် မှာ အမ မိသားစု ရှိရာ ကို သူမ ကို ခေါ်ပြီးပြတယ် ။ အမ က မြင်မြင်ခြင်း မှာပဲ သူမ ကို ချစ်ခင်သွားတယ် ။ သူမ မျက်နှာလေး က မျက်နှာမြင် ချစ်ခင် ပါစေ ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းမျိုး ပြည့်ထားသလိုပဲ ။ အစ ကတော့ အမ က မင်းတို့ နေ့လည်စာစားပြီးမှ ပြန်ကြ ဘာညာ နဲ့ အားတက်သရော ဝယ်ခြမ်း ချက်ပြုတ် နေတယ် ။ သူမ လည်း အမ တားတဲ့ ကြားက နေပြီး အမ ကို ဝိုင်းကူ ချက်ပြုတ်ပေးတယ် ။ အားလုံး ချက်ပြုတ် ပြီးတော့ အပြင်သွားနေ တဲ့ ယောက်ဖ ပြန်အလာကို ထမင်းစားဖို့ ထိုင်စောင့်ရင်း စကားပြောနေ ခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒီမှာ သူမ က ” အမ ကို မညာချင်ဘူး” လို့ ပြောလာပြီး သူမ ရဲ့ အလုပ် အမှန်ကို အမ ကို ပြောလိုက်တယ် ။ အမ က မျက်မှောင်ကြုံ သွားပြီး ကျွန်တော့ ကို ကြည့်တယ် ။ တွေေ.တွ. ချင်းမှာ အထည်ချုပ် စက်ရုံ အလုပ်လို့ သူမ နဲ့ အမ ကို ကျွန်တော် က ညာပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာလေ ! အမ မျက်နှာ တချက် ပျက်သွားပြီး စကား လမ်းကြောင်း လွှဲပစ်လိုက်တယ် ။ သူမ မျက်နှာ လေးလည်း ညှိုး သထက် ညှိုးကျသွားခဲ့တယ် ။ အမ အိမ် ကနေ အပြန် တလမ်း လုံးမှာ သူမ စကား တစ်လုံးမှ စမလာ ခဲ့တော့ပဲ နှုတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေခဲ့တော့တယ် ။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း က စပြီး သူမ ကျွန်တော့ ကို ရှောင်နေခဲ့တော့တယ် ။ ကေတီဗီ ကို မလာဖို့ လည်းပြောတယ် ။ ကျွန်တော် မနေနိုင်လို့ သွားတွေ.ရင် လည်း အတွေ.မခံ တော့ဘူး ။ မကြာခဏ ငိုနေတယ် လို့ သူမ သူငယ်ချင်း တွေဆီ ကနေသိရတယ် ။
အမဆီ ကို သွားပြီး ကျွန်တော်ခံစားနေ ရတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင့်မိတယ် ။ အမ လည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ် ။ ပြန်ခေါ် လာခဲ့ပါ – အမ အကောင်းဆုံး အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်အောင် ပြောဆိုပါမယ် ဆိုပေမဲ့ သူမ ရဲ့ စိတ်ကို ကောင်းကောင်း နားလာခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့ အဖို့ မျှော်လင့် ချက်မဲ့နေ ပြီဆိုတာ တရက်ပြီး တရက် နားလည်လာခဲ့တယ် ။ အဲဒီ က နေ နှစ်ပတ်လောက် ကြာတော့ သူမ မလာပါနဲ့ လို့ တားမြစ်ထားတဲ့ သူမ ရှိရာကို ထပ်ပြီးသွားခဲ့တယ် ။ သူမ မရှိတော့ဘူး ။ အဲဒီ ဆိုင် ကနေ ထွက်သွားတယ် ။ သူမ သူငယ်ချင်း တယောက်ကို အကူ အညီ တောင်းပြီး သူမ မိခင် ဆီ ကနေ အိမ်ပြန်ရောက် မရောက် သတင်း စုံစမ်း ခဲ့တယ် ။ သူမ အိမ်ကိုလည်း ပြန်မသွားခဲ့ဘူး ။ ဒီတော့ အလုပ်တနေရာ ပြောင်းသွား ပြီလို့ နားလည် မိတဲ့ ကျွန်တော် သူမကို ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ နေရာ အတော်များများ မှာ လိုက်ရှာ ခဲ့မိတယ် ။ ဘယ်လိုမှ ရှာလို့ မတွေခဲ့ဘူးဗျာ ! သူမ မိခင် နဲ့တော့ သူမ အဆက် အသွယ် အမြဲ ရှိနေခဲ့တယ် ဆိုတာ တဆင့်စကား ကနေ ကြားသိခဲ့ရတယ် ။ ကျွန်တော် သိတယ် ။ကျွန်တော် သိပါတယ် ။ သူမ ရန်ကုန် မှာပဲ ရှိနေတယ် ။
ဖတ်ရှုအားပေးသူများအား ကျေးဇူးပါဗျား !
တွေ့ ရင်ပြောကြပါလေ ××××ကျေးဇူးဆပ်ပါမည်
လက်ခံထားတဲ့ သူတွေကို ××××××××
လက်ခံထားတဲ့ သူတွေကို ××××××××တရားစွဲ ဆိုမည် ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ငယ်ငယ်က သီချင်းလေးပါ
ပျောက်နေတာလဲ ကြာပေါ့ နော်
ဟုတ်ကဲ့ ဦးဆာ ! ကျန်ခဲ့ တဲ့ ရက်တွေ က အလုပ် များ နေခဲ့ လို့ပါ ။ ရွာထဲ ဝင် ပြီး ဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ မရေး ဖြစ် မမန့် ဖြစ် ခဲ့တာပါ ။ စောစောစီးစီးအားပေး ခံစား ဖတ်ရှု ပေးသွားတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါ ။ဒါနဲ့ —- တွေ.ရင် ပြောဦးနော် !။ ဟဲဟဲ —-
အပေါ်မှာ မန့်သွားတဲ့ လူကြီးဆီမှာ သေချာပေါက်ရှိရမယ်
ဆရာပေ ကိုသွေးဆောင် က ဖျာရောင်း သွားတာကို ကနဦးမန့်တဲ့လူကြီးက ၀ယ်လိုက်တာပေါ့။
လှောင်ကုန်ရဲ့  သဘောက ကြာကြာထားရင်ဈေးတက်တတ်တယ်လေ
ဒီတော့ရတာဝယ်ထား ဈေးမများပေါ့ဗျာ ဟဲ ဟဲ
မနာလိုမဖြစ်ကြပါနဲ့  ဈေးကောင်းရင်ပြန်ရောင်းမှာပါ
ဦး ဆာ ရေ ! လုပ်နဲ့လေဗျာ ! အချင်းချင်း တွေပဲ ဟာပဲ ဟာကို ! ကိုပေ နဲ့ ကိုခ ရေ ကျေးကျေးပါဗျို့ !
တွေ့ခဲ့ရင် ခေါ်လာပေးမယ်နော်…….. :hee:
ဟုတ်ကဲ့ ! သူမက ခေါ်လို့ မလိုက်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော့ရဲ့ ဒီဖုန်း နံပါတ်လေး ပေးပေးပါဗျာ ! ၀၉ – ၅၂၈၁၅၀၀ ! ဟဲဟဲ ! ကျေးကျေး ဗြုတ်! ( ဗြုတ်= ဗျို့ )
လမ်းကြုံရင် .. ပြောပေးကြပါ ..
ဟေ့လူဂျီး ဒါ တကယ့်အဖြစ်လားဂျ ..
ရေးထားတာ မိုက်တယ်ဗျာ ..
ခင်ညား အေဗာတာ လား ! အဲဒီ ပုံ ကြိုက်တယ်ဗျာ ! မင်းတုန်းမင်းကြီး သွားကျိုးနေတဲ့ ပုံနဲ့တူတယ် ! စိုင်းစိုင်း ခမ်းလှိုင် လေသံ နဲ့ပြောရရင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက် အဲဒီနေ့က မိုးမရွာပါ —- ( ဆောင်းတွင်း ကြီး ဖြစ်နေလို့ ) ဟဲဟဲ ! ကျေးကျေး ပါ ဗြုတ် !
သံယောဇဉ် ပေါ့ဗျာ…တွေ့ချင်လို့ လိုက်ရှာရင်တော့
အယ် ဦးလေးမိုက်ကလည်း အဲလိုတော့ပြောနဲ့လေ ..
ပိုစ် ရှင်ရေ ဒါ့ပုံလေးး မြင်ရမယ်ဆိုလဲ တော်သေး..
ဓာတ်ပုံ က အိမ်မှာကျန်ခဲ့တယ်ဗျ ! မိုးယုစံ ကို နည်းနည်းလေး ပိုချောအောင် ထပ်ရွှိုင်းပြီး ထားတဲ့ပုံမျိုးလေးမြင်ကြည့်ပြီး မှန်းရှာပေးနော် ! လွဲရင် လည်း ချိတ်ချိုးဘူး ! ဟီး ! ( သူမ က ရွှေဘို နယ်ဘက် က ဆိုတော့ တခါတခါ စကားပြောရင် ဟုတ်တယ် – မှန်တယ် ဆိုတာမျိုး ကို ဟုတ်တာပါ့ ! မှန်တာပါ့ လို့ သတိထားပြီး ပြောနေရင်းကနေ ပြောတတ်တယ် ) ကျေးကျေးပါ မိုင်ဂျူလေ !
မမြင်အောင် ပုန်းကာ ဝှက်ကာရယ် — မမြင် အောင် ဖုံးဖိထားပါတယ် — အန်! ဟုတ်လား သိဘူး ဗျ ! အယ် ( လ ) ဆိုင်းဇီ သီချင်းထဲကလို တမင်တကာ ပုန်းကာဝှက်ကာ နေသူလေးပေါ့ဗျာ ! စရိတ် ! စရိတ် ! အဲဒီ စရိတ် အကြောင်းတော့ ကြောတော့ပါဘူး ဦးမိုက်ရယ် —- ရန်ကုန်မြို့ အနှံ့ ရှာခဲ့ရတာဆိုတော့ — ဟင်း ! ကြောချင်ဘူး — ရွှတ် ! ( နှပ် ညှစ်သံ ) ။ ကျေးကျေးပါ ဦးမိုက်ရေ !
အလဲ့ … ကိုရဲရင့်လှိုင်ဒါမျိုးလည်း ရေးတတ်တယ်လား … ။
ဇာတ်လမ်းကိုပဲ ဖတ်ပြီးပြောရလျှင်လေ …. အထီးကျန်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က ၊ စွဲမိစွဲရာ စွဲသွားပြီး ၊ ဘ၀တူ အထီးကျန်နေတဲ့ကောင်မလေးကို … ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ စာနာစိတ်တွေ ရောပြီး … စွဲလမ်းမှု ပြသနာ တက်သွာတာဖြစ်မယ် ..ဟီး ။ :hee:
ဟုတ်ပါ့ဗျာ !ဒါနဲ့ ဇတ်ညွန်းတဲ့ နေရာမှာတော့ မအိတုံ က ရှယ်ပဲဗျ ! စွဲမိစွဲရာ မလွှတ်ချင်တတ်တဲ့ သဘာဝ လေးကလည်းရှိ ၊ မရနိုင်တော့မှန်းသိလေ — ပိုလို့ တမ်းတလေ လိုချင်လေ ဆိုသလိုမျိုးကလည်းရှိဆိုတော့ စွဲလမ်းမှု ပြသနာ တက်သွာတာပေါ့ဗျာ ! ကျေးကျေးပါ မအိတုံရေ !
ဒီလို ပိုစ့်လေးတွေ များများဖတ်ဖို့ မျှော်နေမယ်နော်..
အော် ဒါနဲ့ ကိုရဲရင့်လှိုင်ခုတလော ပျောက်နေတယ်နော်………..
ခင်မင် အားပေး တဲ့ မမေဖလားဝါး ကို ကိုယ့်ရွာသူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ကော စာပေမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ ကျွန်တော်ကလည်း ခင်မင်လေးစား လျှက်ပါ ။ ဟုတ်တယ်ဗျာ —- ခု ကျွန်တော် အလုပ်လုပ် နေတဲ့ ပရောဂျက် က ၇၅ ရာနှုန်း ကျော်လာပြီဆိုတော့ ပရောဂျက် အမြန်သိမ်းချင်လေ တွန်းလေ ဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်တော့ အပိုင်း က အဓိကျတဲ့ ကွန်ကရစ် ကို ထုတ်ပေးရတဲ့ အပိုင်းဆိုတော့ အလုပ်များနေတာနဲ့ ကွန်မန့် ဝင်မရေးနိုင် ပို့ ( စ ) မတင် နိုင်ပဲ ပျောက်နေတာ ။ ကျေးကျေးပါ ဗျာ !
ကိုလှိုင်ကြီးရေ…ဘားမှမပူနဲ့ ..သဂျီးဆီက ကြိုတင်ပွိုင့် ဒေါ်လှ တစ်သန်းလောက်ချီးပြီး လိုက်ရှာကြတာပေါ့..
ဒါကြောင့် ဘီးအီးဒီ ကိုဗိုက် ကို ယုံကြည်အားကိုး နေရတာပေါ့ဗျာ ! အဟေး..အဟေး. သဂျီး ကို မေးကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ကို ချီးပေး နိုင်ပါတယ်တဲ့ ! ဒေါ်လှ တွေ ! ကိုဗိုက် ရေ ! ကျေးကျေးပါ ဗြုတ် !
အဆစ် အပေါက် ကျတဲ့ မော်ဒန် ကဗျာ တွေကို စာဖတ်သူတွေ နားလည်ခံစား နိုင်အောင် ဆွဲခေါ်ရေးသားနိုင်တဲ့ ကိုကမ်း က သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ဖတ်ရှုအားပေးသွားတယ် ဆိုတာသိရတော့ အားတွေ ထပ်ပြီး တိုးလာပါတယ်ဗျာ ! ကျေးကျေးပါ ကိုကမ်းရေ !
သံယောဇဉ် …… သံယောဇဉ် …. လူကို အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်စေတယ် …………
အိမ်မက်ဆုံရာမှာ သွားပြိုင်ပါလား လူပုလေးဒွေ အမေရေ.
သံယောဇဉ် က ကိုလေးဖြူ ! အရူး တပိုင်း က ကိုအငဲ ဂျ ! ကျေးကျေး ပါ ကိုဂ ရဲ့ မနွယ် ရေ !
အော် ကိုရဲရင့်ရယ်……. အစ်ကိုကိုသနားလို. ကျွန်တော်ကေတီဗွီတွေ ပက်ရှာပေးပါမယ်ဗျာ….. စိတ်မကောင်းလိုက်ထာ….
အဲအဲ ကျွန်တော်သွားချင်လွန်းလွန်းလို.တော့ ဟုတ်ဘူးနော်………. ကိုရဲရင့်ကို တနားရို. ခိခိခိခိ :hee:
တွားချင်လွန်း လို့ ဟုတ်ဘူးတဲ့ ! ကျွန်တော့ ကို တနားရို့ တဲ့ ! ခိခိခိ — ဒါပဲနော် ရှာပေး ရှာပေး အဟေး ဟေး ဟေး —- ကျေးကျေးပါဗြုတ် !
စဖတ်ကထဲက.. ဒါမျိုးလာမယ်…လာတော့မယ်ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်တာ…
နောက်နှစ်မွေးနေ့.. ဆူးလှေဘုရားမှာ သူမ ရှိနေမယ်..။
သူကြီး မန့် တာကို ဖတ်ပြီး အရင် ရယ်နေရတယ်ဗျ ! .” ဒါမျိုးလာမယ်…လာတော့မယ်ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်တာ…
နောက်ဆုံးလည်းရောက်ရော… ဒါမျိုးဖြစ်တာပဲ..” ဆိုတာလေဗျာ ! ပြီးတော့” နောက်နှစ်မွေးနေ့.. ဆူးလှေဘုရားမှာ သူမ ရှိနေမယ်..။” ဆိုတာ ဖတ်ပြီး တော်တော် လျှင်တဲ့ အကွက်မြင်တဲ့ တဂျီး လို့ တွေးမိပြီး ရယ်မိတယ် —- ဟိဟိဟိ — ကျေးကျေးပါ ခင်ဗျာ့ !
စိတ်ရှိတိုင်းပြောရရင်မေ့နိုင်အာင်ကြိုးစားပါကိုရဲရင့်လှိုင်ရေ..။ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ ပုန်းတဲ့သူကပုန်းနေတာကိုး ကံမကုန်ရင်တော့ပြန်ဆုံမှာပေါ့။
“မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ အတွက် သိပ်ခက်နေပြီလေ —- ဟိုမှာ ဒို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းခွဲ လေး နောက်ထပ် ပြန်မဆုံတော့ ဘူး ဟူး — ” ( ဖြူဖြူကျော်သိန်း ဟဲဗီး ဆိုသံ ) အလကား နောက်တာ ! သဇင်ရဲ့ နှုတ်ဆက်စာ သီချင်း ထဲ ကလို သူမ ကို တွေ.ရင် အရင် မေးရဦးမယ်ဗျာ ! အနေဝေး လို့ သွေးအေး သွားပြီလားလို့ ? ကျေးကျေးပါ မရွှေကြည် !
လူပြောအရမ်းများတဲ့ကေတီဗွီဆိုတာကိုရောက်ဖူးချင်ခဲ့တာ. သွားဖို့ကဘယ်လိုမှမအပ်စပ်ဘူးလေ။ ကံကောင်းချင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့လကဦးလေးပြန်လာတော့ အစ်ကိုတွေ၊ဦးလေးတွေနဲ့သူတို့ဟိုတယ် မှာပဲရှိတဲ့ ကေတီဗွီဆိုတာကိုသွားခွင့်ကြုံခဲ့တယ်. မီးမှိန်မှိန်နဲ့ခလေးမလေးတွေဘောင်းဘီတို စကပ်တိုလေးတွေနဲ့ ကောင်တာနားမှာဟိုတစ်စု သည်တစ်စုစောင့်နေကြတယ်။ သူတို့ဆီမှာက M3 တို့မှာလိုကိုယ်ဆိုချင်တာကိုယ်တိုင်ရွေးဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့လည်း တစ်ယောက်ခေါ်ရတယ်။ ခလေးမလေးက ၁၈၊၁၉လောက်ပါပဲ. ကျမတို့တွေကလည်း ကိုယ့်အမျိုးတွေပျော်ချင်လို့သွားတာဆိုတော့ (ကျမတို့ညီအစ်မလည်းပါနေတော့) သူလည်းသီချင်းပဲရွေးရတာပါ။ နောက်မိုက်ခဲကကျမဆိုတော့သူက ကျမဘေးလာထိုင်တယ်လေ။ ဦးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့သူဆိုချင်တဲ့အင်္ဂလိပ်သီချင်းမရှိလို့ကောင်မလေးကိုစွတ်ရစ်နေလို့ ကျမကသူ့ကိုသနားလို့ ကြားထဲက ရန်ဖြစ်ပေးရသေးတယ်။ ခလေးမလေးက အပြောအဆိုခံရတာလည်းအပြုံးမပျက်ရှာပါဘူး။ ကျမပြန်လာတော့ စိတ်မကောင်းတာပြောမိတော့ အစ်ကိုတော့ပြောတယ် သူတို့ဝင်ငွေက ငါတို့ထက်အများကြီးသာတယ်တဲ့။
ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့ မတ်စေ. လေး တချို့ ဒီ ပို့ ( စ ) ထဲမှာ ရှိနေတယ် ( မတ်စေ. ဆိုလို့ စကားပြောရင်ေ.ရှက မစေ. ကလေ မစေ. ကလေ နဲ့ ပြောတတ်တဲ့ ( ဒေါ် ) မေသန်းနု ကို သတိရ သွားသဗျား ! ဟီး — ) စားဝတ်နေ ရေး ကြောင့် တကယ်တွေးကြည့်ရင် သနားစရာကောင်းတဲ့ အနယ်နယ်က အမျိုးသမီးလေးတွေ ရန်ကုန် လို မြို့ကြီးမျိုးမှာ များများလာတယ်ဗျာ ! ဖတ်ရှု အားပေး သွားတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါ!
ဦးရွှေမန်းကြီး စကားငှားပြောရရင် …
ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီအခြေနေတွေကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့
ဒီအတွက် ( အခြေခံ လူတန်းစား လူထု တရပ်လုံး အတွက် ) ပြောင်းလဲ ဖြည့်ဆည်းပေးရမဲ့ အရာတွေ က အများကြီးပါဗျာ ! ခေါင်းစဉ်ကတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ရေးပေါ့ ! ဘယ်လိုတိုက်မှာလဲ ??? ဘယ်လောက်ကြာကြာ တိုက်ဖျက်မှာလဲ ??? ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ တိုက်ဖျက်နေပြီလဲ ??? ဘယ်လောက်အထိ အပြုသဘောဆောင်မှုတွေ ထိရောက်နေပြီလဲ သိချင်သားဗျ ! “ထိုင်ကြည့်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ …..လို့ ပြောသွားတဲ့ ဦးရွှေမန်းကြီး ကိုကော ကိုထွန်းပြောင်ကိုပါ လေးစားစွာနဲ့ ကျေးကျေးပါဗျာ !
အင်း… အဲဒီမှာ စတွေ့တာပါပဲ…. အထီးကျန် အတူတူခြင်း ဆုံဆည်းတာပေါ့လေ…
‘အထီးကျန် သိမ်ငယ်မှု များစွာနဲ့ —- အစိမ်းလိုက် နင် ဖဲ့ခြွေ ခဲ့တော့ — ဂဘာတဖက်မှာ နင်နေထိုင် တယ် ဂဘာတဖက်မှာ ငါနေထိုင်တယ် ” ( ဒီက စိုင်းစိုင်း ရင့်လှိုင် ပေါ့ဗျာ — ဟဲဟဲ — ) ကိုယ့် အမ မို့ ပြောင် နောက်သွား တာ နော် ! မမနော ရေ ! ကျေးကျေး ပါ ဗြုတ် !
မင်းကို သူတကယ် စိတ်ဝင်စားရင်တော့ တစ်နေ့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ချက် ဖြစ်နိုင်တာက သူဟာ ကြေးစားဖြစ်ခဲ့ လို့ မင်း အတွက် ဝေးရာတမင်ရှောင်ထွက်သွားတာ လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီတော့ တကယ်လို့များ သူ့ကို ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ရင် သူမရဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘဝကို မင်းနားလည်ပေးနိုင်မှာလား။
အဖြေက Positive ဟုတ်/မဟုတ်။ :hee:
ကြေးစား မဖြစ်ခဲ့ဘူး လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူ နဲ့ ကျွန်တော် ဆုံတွေ. ခဲ့တဲ့ ကာလလေး က သိပ် တို တောင်းပါတယ် ။ ဘဝ နဲ့ စာရင်ပေါ့လေ — တကြိမ် တခါမျှ သူမ အပေါ်မှာ ကျွန်တော် အခွင့်အရေး ရနိုင်ပေမဲ့ မယူခဲ့ပါဘူး ! ဒါကို က သူမ နှလုံးသားထဲ ကျွန်ရောက် နိုင်ခဲ့တဲ့ အချက်ထင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့ အတွက် ဝေးရာတမင်ရှောင်ထွက်သွားတာ လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မသိတော့ပါဘူး အရီး ရယ် — အရီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နှစ်ယောက် လုံး အတွက် မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အရာတွေ ထဲ ကတခု လို့ ကျွန်တော် မြင်လာတယ် ။ သူမ ရဲ့ စိတ်သဘာဝ အရ အရင် ကထက်တောင် ပိုပြီး ရင့်ကျက်နေပြီလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ် ။( Reply မနှိပ်မိ သွားလို့ ပြန်ကပ် ပေးလိုက်ပါတယ် အရီး ခင်ဗျ ! )
အော် ဒီလို အချစ်တွေလည်း ရှိတယ်လား အားပေးသွားပါတယ် နှစ်ယောက်လုံးကံကောင်းပါစေလို့
ဆုတောင်း ပေးတဲ့ အတွက်ရော — အားပေးသွားတဲ့ အတွက်ပါ ကျေးကျေးပါ မပု ( ရှ ) ရေ !
ကြေးစား မဖြစ်ခဲ့ဘူး လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူ နဲ့ ကျွန်တော် ဆုံတွေ. ခဲ့တဲ့ ကာလလေး က သိပ် တို တောင်းပါတယ် ။ ဘဝ နဲ့ စာရင်ပေါ့လေ — တကြိမ် တခါမျှ သူမ အပေါ်မှာ ကျွန်တော် အခွင့်အရေး ရနိုင်ပေမဲ့ မယူခဲ့ပါဘူး ! ဒါကို က သူမ နှလုံးသားထဲ ကျွန်ရောက် နိုင်ခဲ့တဲ့ အချက်ထင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့ အတွက် ဝေးရာတမင်ရှောင်ထွက်သွားတာ လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မသိတော့ပါဘူး အရီး ရယ် — အရီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ နှစ်ယောက် လုံး အတွက် မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အရာတွေ ထဲ ကတခု လို့ ကျွန်တော် မြင်လာတယ် ။ သူမ ရဲ့ စိတ်သဘာဝ အရ အရင် ကထက်တောင် ပိုပြီး ရင့်ကျက်နေပြီလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ် ။
စိတ်ကူးယဉ် နဲ့ လက်တွေ့ အားပြိုင်ပွဲ…..
ဒီအတိုင်းဆို ပြန်ဆုံဖို့ မလွယ်တော့။ ကိုရဲရင့်လှိုင်…ဒီလောက်လိုက်ရှာနေတာ
တောင် အသစ်ထပ်မတွေ့သေးဘူးလားရှင့်…ကောင်မလေးကလည်း အသစ်
ထပ်တွေ့နေပြီလားမသိနော့(အလုပ်ပြောင်းပေမယ့် ဒီအလုပ်ပဲ ပြန်ဖြစ်နေရင်)
ဟုတ်တယ်ဗျ ! စိတ်ကူးယဉ် နဲ့ လက်တွေ့ အားပြိုင်ပွဲ….. ကျွန်တော့ အလုပ် အခြေ အနေ အရ အသစ်တွေ.ဖို့ မလွယ်ပါဘူးဗျာ ! အသစ်လည်း ထပ်မတွေ. ပါရစေနဲ့ဗျာ — နော့ ! ကျေးကျေး ပါ မနှင်းရေ !
ဖြစ်နိုင်ချေအတော်များများက frankly, အရီးလိုပဲ တွေးမိတယ်…
ငါ အသည်းနှလုံးလေးထဲက မျှော်နေတယ်။
ငါ လမ်းခွဲခြင်း မေ့လို့နေချင်တယ်
မင်းကထားရစ်တဲ့ အချစ်အချိန်တိုင်းနဲ့အမျှ ”
ကျေးဇူးပါ ကိုလှိုင် ရေ !
အလက်ဆင်း ရေ ! —- လေးပါဆို ! ကျေးကျေးဗြုတ် !
ရေဆုံး ကုန်းတစ်ဝက်ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ
ဟာဂျာ —- အဲလို လုပ်နဲ့ လေဂျာ ! ဟဲဟဲ ! ကျေးကျေး ပါ ကိုဘိုင်း ရေ !
သံယောဇဉ်ကို လျှော့တွက်လို့ မရဘူး နော်..
မတွယ်ခင်က သင့် မသင့် အရင်စဉ်းစားတာ
အဲဒီအချိန်မှာ အကောင်း အဆိုး မခွဲချင်ကြတော့ဘူး..
အားပေးသွား ၊ ဆုတောင်းပေး သွားတဲ့@Candle ကို ကျေးကျေးပါ !